Ihe omimi: Ngwa ntanetị Web Web
Iwepu ozi site na weebụsaịtị ndị ọzọ nwere ike ịbụ atụmatụ dị irè maka ndị ọrụ ahụ achọrọ ịgbasochi oge ndị a site na nyochaa ihe ndị dị ugbu a. E nwere ọtụtụ nde ebe nrụọrụ weebụ dị na net ebe ndị ọrụ nwere ike nyochaa ozi ha chọrọ. N'ọnọdụ ụfọdụ, ha nwere ike ịchọ ịnweta ọdịnaya weebụ dịka isiokwu gbasara ngwaahịa, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị mmadụ. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike iwepụ ihe ọmụma site na ọdịnaya weebụ. Otú ọ dị, ebe nrụọrụ weebụ na-enwe ọtụtụ peeji nke, enweghị ike nyochaa ma depụta ya na aka. Enwere ọtụtụ ngwaọrụ nke onye ọrụ nwere ike iji wepụ ọdịnaya weebụ na-akpaghị aka.
Onye nwere ike ịjụ nke kachasị mma iji wepụ data. N'ezie, ọ dị ndị mmadụ mkpa inweta ndepụta nke URL kpọmkwem nke a ga-ehichapụ nke ọdịnaya. Ihe ka ọtụtụ n'ime ebe nrụọrụ weebụ ndị na-egbu egbu bụ ngwá ọrụ ndị na-achọ ịnakọta ozi weebụsaịtị. Mgbe ị "na-enye nri" ndị crawlers weebụ a na ndepụta nke ebe nrụọrụ weebụ ha chọrọ iji kpochapụ, i nwere ike nweta nsonaazụ dị egwu! N'ọnọdụ ụfọdụ dị egwu, webmasters na-agbachitere bọmbụ ha na sava ndị ọzọ. Ọ nwere ike ịnwe ịkwado ngwá ọrụ weebụ gị ntanetị na ihe nkesa nke atọ iji rụọ ọrụ ụfọdụ n'ime iwu ndị a.
Otu n'ime ihe ntanetị weebụ kacha mma bụ Webhose.io. Iji ya mee, ị nwere ike ibudata otu weebụsaịtị na chekwaa ya na draịvụ ike gị maka ịnweta ozi ntanetị. Otu saịtị na draịvụ ike na-aza ngwa ngwa n'ihi na ọ dabere na ịntanetị njikọta ọsọsọ ma ọ bụ nkesa bandwidth gị. Ọzọkwa, web crawlers download ọtụtụ nde ibe weebụ kwa ụbọchị. Usoro omenala nke ichekwa ibe weebụ ibe weebụ dị nnọọ ngwa ngwa ma nwee ike ịdighi ike maka saịtị na ọtụtụ peeji. Dị ka ọmụmaatụ, ịnwere ike iji bọtịnụ ịchọ ozi dị ka 'Obama ga-eleta'. Ngwaọrụ ndị a na-achọ ozi niile ha chọrọ ma chekwaa onye ọrụ ọtụtụ oge na ego.
Ngwá ọrụ ntanetị weebụ nwere nhọrọ nke ịmepụta ụfọdụ n'ime ihe ndị ha mere. Dịka ọmụmaatụ, ndị ọrụ nwere ike ịtọ usoro nhazi. Ọzọkwa, ọ ga-ekwe omume ịmepụta crawlers na-anakọta ozi gbasara ebe nrụọrụ weebụ na oge ụfọdụ. Ndị ọrụ nke ngwá ọrụ dị otú ahụ nwere ụfọdụ akụkụ dị mma dịka ntọala ntọala. N'ihi ya, ịnwere ike ịnye ma ọ bụ wepu akụkụ weebụsaịtị nke dị mkpa ka ebudata.
Nchịkọta weebụ abụghị akụkọ sayensị! Naanị ihe ị chọrọ bụ iji ihe ntanetị weebụ wepụ. Ndị ọrụ nwere ike ịnweta data sitere na weebụsaịtị ma chekwaa ya na draịvụ ike iji jiri ya na-eme n'ọdịnihu. Dị ka ọmụmaatụ, ị nwere nhọrọ ịchọta akụkọ sitere na weebụsaịtị ndị ọzọ na-eji ha maka saịtị ndị ọzọ. Akụkụ SEO a na-enye ihe ọmụma zuru ezu banyere otu esi eme ka ahụmahụ gị nyochaa ozi ọma dị ka o kwere mee Source .